Ukwazi ezinye izindlela: Isingeniso | Kusuka kuLinux
Ukwazi ezinye izindlela: Isingeniso
Kuyini ukusetshenziswa kokuphila uthi ukusatshalaliswa kwethu kuhle uma singakhombisi ngempela abasebenzisi bamanye ama-Operating Systems izinzuzo ze I-GNU / Linux?
Kungakho nginqume ukuqala ukubhala uchungechunge lwama-athikili lapho ngizozama ukuchaza ngezithombe nangombhalo, ukuthi ezinye izinhlelo zokusebenza esizisebenzisa nsuku zonke ku-OS yethu zakhiwa futhi zisebenza kanjani, futhi ngaleyo ndlela sikhombise ngezibonelo ezingokoqobo ubuhle nobubi ngamunye wabo.
Ngizozama ukucaciswa ngangokunokwenzeka, futhi-ke, ukuze ngingabi ngumbhali ophuzi, kuzofanele ngenze ucwaningo lokuqala lwezinhlelo zokusebenza ezizoqhathaniswa. Kufanele ube nobulungiswa. Ngizosebenzisa lokhu I-Debian ene-KDE y I-Windows 7 Professional.
Izogqoka KDE ngezizathu ezi-3 ezilula:
Yimvelo yedeskithophu engiyisebenzisayo futhi kuzoba lula kimi ukwenza lo mbhalo.
Yimvelo manje ebukeka ifana nokuthi abasebenzisi bakujwayele ini ngeWindows 7.
Yimvelo yedeskithophu ephelele kakhulu, njengoba sikwazi ukubona ngokuhamba kwesikhathi.
Ukulandela lesi sethulo, i-athikili elandelayo engicabanga ukuyifaka ekukhiqizweni izoba njengesihloko sayo: Ukwazi ezinye izindlela: I-Dolphin vs Windows Explorer, futhi-ke, ungacabanga kakhulu noma kancane ukuthi kuyini.
Inhloso yami akukhona ukudala impikiswano, ingasaphathwa eyamalangabi, kepha ukukhombisa nje ukuthi yiziphi izinzuzo zangempela zalezo zinhlelo zokusebenza esizisebenzisa nsuku zonke nokuthi sinezinketho esingazinaki singanakile, uma kuqhathaniswa nalezo eziza ngokuzenzakalela kwiMicrosoft Windows .
Angikhulumi nge-OS X, ngoba ngokunengqondo anginalo ithuba lokuhlola le OS kahle ngokwanele ukunikeza umbono oqotho.
Ngizokweqa futhi ezinye izihloko ezingaba nentshisekelo kwabasha, ngoba singathola izindatshana eziningi zalolu hlobo kubhulogi yethu. Nazi ezinye engithola zithakazelisa ukuzibhekisisa:
Yini okufanele umsebenzisi weWindows ayazi nge-GNU / Linux?
Isakhiwo sefayela ku-GNU / Linux
Izinkomba zakhiwe kanjani ku-GNU / Linux?
I-Linux ye-Dummies III. Izindawo zedeskithophu.
Amathiphu wokukhetha ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux
Kulungile-ke .. Ngithemba ukuthi indatshana yokuqala yalolu chungechunge isilungele ngokushesha okukhulu ... 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukwazi ezinye izindlela: Isingeniso
Amazwana ayi-18, shiya okwakho
UDaniel Rojas kusho
Kuhle, ngilinde izindatshana 😀
Phendula uDaniel Rojas
Kubukeka sengathi kungumbono omuhle kimi, futhi kuzoba wusizo olukhulu uma kukhulunywa ngokukhombisa ezinye izindlela zabasebenzisi beWindows bamanje futhi kuzovumela ukuthuthukisa ushintsho olusuka ku-Windows 7 luye ohlelweni olune-Kde (noma kunjalo, kuzoba futhi into yokusebenzisa iWindows 8, ngaphezu kwanoma yini ongayiqhathanisa futhi uyiqonde uma ijika lokufunda kusuka ku-W7 liye ku-W8 noma i-Debian ne-KDE kufanelekile).
Kushiwo kahle kakhulu lokho kwe
»Kusizakala ngani ukuqhubeka nempilo uthi ukusatshalaliswa kwethu kuhle uma singakhombisi ngempela abasebenzisi bamanye ama-Operating Systems izinzuzo ze-GNU / Linux? «
Sawubona, ngiwuthandile lo mbono, ngingumsebenzisi weWindows futhi kungibize kakhulu ukwazi iLinux, kangangoba ngike ngiyizame ezikhathini ezi-5, yize manje sengingeniswe kakhulu, kunemigomo engaziwa futhi oyiphatha kalula futhi ucabanga ukuthi abanye bayazi ukuthi kumuntu onjengami akunakwenzeka. Ngokuqondene nezicelo, ngiyakuhalalisela futhi ngikukhuthaza ukuthi ukwenze ngaso sonke isikhathi ngendlela eqhathanisayo ngoba ngaleyo ndlela kuzoba lula ngathi kulabo abasanda kuzalwa ukuba balwazi kangcono lolu hlelo lokusebenza.
Uma unokungabaza noma imibuzo, ungazisoli futhi ukwenze, kuyiqiniso ukuthi ezikhathini eziningi sithatha izinto noma imiqondo njengokungajwayelekile, futhi abanye abasebenzisi be-novice bayalahleka. Noma sizama njalo ukuchaza yonke into, sihlala sinezinto ezisele 🙁
Ngakho-ke ngiyaphinda, noma yimiphi imibuzo onayo, silapha ukukusiza 😉
Buza ngaphandle kokwesaba ukuthi emhlabeni we-Linux sonke senze ubuso besilima ngezinto eziningi, ukuthi uma wazi isiNgisi esincane ngisho nomhumushi we-google - futhi 'cishe konke ngeSpanishi - kuseshwa kuGoogle noma ku-buntu.com - engibona ukuthi usebenzisa iChromium uzothola imibhalo emincane impela.
Uma ufuna ukusebenzisa i-Chrome ungakwenza futhi, ukulanda isikweletu, bese uqhafaza kabili, i-USC izovula kuphela futhi uzokwamukela kuleli cala okufana kakhulu nokufaka i-ex WMS ye-MS kunephakeji nge-USC noma ikhonsoli.
Kepha usebenzisa ubuntu okuyisinyathelo sokuqala kokuningi esikutholile futhi ngiyakuhlonipha ukufunda ngeGnu / Linux ngicabanga ukuthi uzokwenza nsuku zonke.
Uma uzokhuluma nge-KDE kuphela, kungani ungasebenzisi i-Chakra, engeyami ubuhle be-KDE.
Ngoba ukuqhathanisa, nokuxuba, i-Nautilus - i-Gnome ne-Unity - ne-Thunar - i-XFCE -, ngokungeziwe kokunye kufanele bangene kumxube - iNautilus isekela izandiso ezamukelekayo kakhulu -
Futhi sigcizelela ukuthi kuLinux singaxuba futhi sisebenzise i-KDE neNautilus noma iThunar, ngisho nomphathi wefayela leWayini ngasikhathi sinye.
Eqinisweni mina ngisebenzisa i-XFCE neThunar njalo, kwesinye isikhathi ngiqala iSudo nautilus ukwenza izinto ezithile - njengokushintsha umnikazi wamafayela ephindelela -
Okufanayo kucela umsebenzi omningi, kepha akunjalo uma ugxila kuzimpawu ezingeziwe zendlela ngayinye nendlela yokusebenza ehlukile - ayihlukile kangako phakathi kweLinux -, ngisho nokufunda i-athikili edlule
Futhi ngincoma i-XFCE ngaphambili, ngephaneli phansi kumuntu oqhamuka ku-MS WOS kune-KDE yokujwayela, yize njengemibono ye-butt, ngamunye wethu unokwethu - okwethu -.
Ngamafuphi, isuka ku-Linux ngaphezu kwe-KDE yize ungakwazi ukukhuluma ngolwazi oluthe xaxa lwe-KDE, impela ubhala futhi wenze noma yini oyithandayo, kumane nje kuyisiphakamiso ukuze injabulo yokufunda wena - engizoba nayo it - indala osukwini lwakhe.
Ngizozama ukukhuluma ngenye indlela kanye nozakwabo, okungenani ku-GNU / Linux, kepha khumbula ukuthi uma singakhulumi ngokunye ukusatshalaliswa nezindawo zeDesktop, kungenxa yokuthi kunzima kakhulu kithi ukuzithola:
1- Ngoba ukuxhumana kwe-inthanethi kubi kakhulu.
2- Ngoba awekho ama-PC engiwasebenzisayo ayimfihlo, wonke avela emsebenzini.
Nokho, ngiyasamukela isiphakamiso sakho ngokuzithandela okukhulu .. 🙂
Endabeni yama-newbies, kukhona ukusatshalaliswa okunokuthile okwenza "impilo yansuku zonke" ibe lula kulabo abasanda kuqala: "isikhungo sesoftware", kulokhu bengizokhetha uKubuntu, hhayi ngoba ngicabanga ukuthi i-distro engcono kune-Chakra (ngiyayisebenzisa futhi ngiyayithanda) kepha ngoba ngaleso sikhathi esibucayi (ukufaka isoftware) iyona efinyeleleka kakhulu. Ngihalalisela isinyathelo salezi zihloko. Jabulela
Isiphakamiso uma uya ezinhlelweni zokuhlela umsindo / ividiyo ungakhetha i-Ubuntu Studio eyi-XFCE, kepha uma uhlala ku-Debian naku-KDE kufanele ufake i-latency kernel ephansi - ikhona kuwo wonke ama-distros - futhi yiyo leyo iza Ngokuzenzakalelayo ku-Ubuntu Studio, noma kunoma iyiphi i-distro ungaba nakho kokubili - okujwayelekile kanye ne-latency eyodwa ephansi - ukuze imiphumela ekusetshenzisweni kokulalelwayo nevidiyo inikeze "izinwele ze-pal" ku-MS WOS naku-OSX.
Ungasebenzisa futhi i-Nice ukwaba okubaluleke kakhulu kulezi zinqubo, kepha ekusebenziseni i-Nice angitholanga okokufundisa okuhle
: Noma kuyathakazelisa. Bengingazi ngalokho ..
Okushoyo kujabulisa kakhulu. Ngingathanda ukufunda ukuhlela amavidiyo nokufaka kahle uhlelo lwe-KDEnlive kuXubuntu. Angikaze ngikwenze ngempumelelo. Futhi into yokubambezeleka ephansi yokuqhutshwa kokulalelwayo nevidiyo… i-athikili noma uchungechunge lwezihloko ezikhuluma ngalolu daba kungasiza.
i-Dolphin vs Windows Explorer ethokozisayo, kimi ihlengethwa alinaso isinciphiso uma liqhathaniswa nanoma iyiphi imenenja yefayela eletha noma iyiphi i-OS noma ideskithophu. Abasebenzisi abangu-50%. Umsebenzisi ojwayelekile wokuwina ungumsebenzisi ongu-50% nomlawuli ongu-98% futhi ukufaka uhlelo olushiya konke kahle ngokuchofoza okukodwa. Kunzima ukushintsha umsebenzisi kusuka kwamanye amapulatifomu, uma engathandi ukubumbana ne-OS futhi afunde.
Umbono muhle, kepha kusale umbuzo okufanele uxazululwe.
—Ungafinyelela kanjani kubasebenzisi beWindows-
Uma uneminye imibono, ngithanda ukuhlangabezana nayo
Mhlawumbe ukukhombisa labo basebenzisi ukuthi ngaphandle kokuthi bayizinto ezicace kakhulu, bangenza ngeLinux ngokufana neWindows futhi bayenze kangcono.
Ngiyavumelana nalokho okushoyo, kodwa ngokombono wami ubunzima obukhulu kakhulu abukho ekusetshenzisweni noma ekuphepheni, kodwa kwinduduzo, kumkhuba ...
Leyo yinkinga, futhi isixazululo asilula. Ngicabanga ukuthi umkhankaso omuhle wokumaketha ungasiza.
Ungayichaza kanjani? ... leyo yinkinga.
I-Canonical Hires Icon Creator Faenza yezimpawu ezintsha ze-Ubuntu
Ithiphu: Faka kabusha ngokushesha